शृंखलाले ‘मिस वर्ल्ड २०१८’ जित्ने सम्भावना बलियो, यसरी जिताउनुहोस् शृंखलालाई... - Kendra Khabar
शृंखलाले ‘मिस वर्ल्ड २०१८’ जित्ने सम्भावना बलियो, यसरी जिताउनुहोस् शृंखलालाई…
२०७५, ३ मंसिर सोमबार १०:०९
मिस नेपाल २०१८ शृङ्खला खतिवडा अहिले मिस वर्ल्डको प्रतिष्पर्धाको लागि चीनमा छिन् । सुन्दरीहरूको विश्वव्यापी प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि मिस नेपाल २०१८ खतिवडा त्यहाँ पुगेकी हुन् । नेपाल बाट हिडेदेखि त्यहाँ रहँदा उनले देशको पहिचान झल्किने प्रस्तुति दिइरहेकी छन् ।
उनले त्यहाँ अन्य देशका सुन्दरीलाई नेपाली भाषा सिकाउने, नेपाली गीत गाउन लगाउने जस्तो काम पनि गरेकी छिन् । त्यसो त यस वर्ष शृङ्खलाबाट धेरै नेपालीले आस पनि गरेका छन् यस वर्ष उनले मिस वर्ल्डको उपाधि जितुन् भनेर । उनको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा आफ्नो परिचय भिडियोमा सार्वजनिक भएको छ जुन रातारात भाइरल भएको छ ।
सबैको सपोर्ट र श्रृंखला स्वंयमको प्रस्तुतिले पनि यो पटक उनलाई मिस वर्ल्डको मुख्य दावेदार मानिएको छ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा उनी २२० देशका सुन्दरीहरुलाई पछि पार्दै भोटिङमा अगाडि रहेकी छिन् । प्रतिस्पर्धामा विश्वका १२१ देशका सुन्दरीहरुको सहभागिता छ । इभेन्ट सन् २०१८ डिसेम्बर ८ मा हुन लागेका बुझिएको छ ।
उनलाई भोट गरेर मिस वर्ल्डको ताज जिताउनको लागि भोटको निकै जरुरत पर्छ ! जस्को लागी मोब्स्टार (MobStar) नामक एप डाउनलोड गर्नु पर्नेछ ! त्यसपछि कुनै पनि समाजिक सन्जाल एकाउन्टबाट लग इन गर्नुपर्ने छ । लग ईन गरेपश्चात अंग्रेजीमा ‘Shrinkhala Khatiwada’ सर्च गर्ने र उनलाई भोट गर्ने ठाउमा पुगिन्छ । हाम्रो तर्फबाट पनि शृंखलालाई सफलताको सुभकामना । तपाई पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो शेयर र भोट गरेर सहयोग गर्नुहोला ।
सचिवालय बैठकलाई प्रभावित पर्ने गरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए
मानहुँकोट जाँदै गरेको गाडी दुर्घटनाः एकजनाको मृत्यु, पाँच घाइते
जीप दुर्घटनाः एकको मृत्यु, ११ घाइते
के होला नेकपाको आजको बैठक ? आ–आफ्नै रणनीतिमा प्रधामन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, यस्तो छ दुबैपक्षको तयारी